ကျနော့ဆရာမလေး – My Blog
အပ်ချုပ်စက်ခုံကို ကွယ်ပီး ထိုင်နေတဲ့ ကိုယ်လုံး အိထွေးထွေးလေးကို အတင်းဆွဲထုတ်ပီး ထူမလိုက်တယ်။ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ ဘလောက်အင်းကျီ နှိပ်စိလေးတွေကို တဖျောက်ဖျောက်မြည်အောင် ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဟင်းလင်းပွင့် ထွက်သွားတာနဲ့ အနက်ရောင်ဘရာစီယာလေး မနိုင်ဝန်ထမ်းထားရတဲ့ ဝါဝင်းစိုပြေတဲ့ နို့ကြီး၂မွှာက ဝင်းကနဲ ပေါ်လာတယ်။ အချိန်မဆွဲတော့ပဲ ဘလောက်လက်ပြတ်ကလေးကို ချွတ်ချရင်း ဘရာ ချိတ်ကလေးတွေကိုပါ သူမဂျိုင်းအောက်ကနေ လက်လျှိုပီး ဖြုတ်ပစ်လိုက်မိတယ်။ ခုဆိုရင် ကျနော့်ဆရာမလေးခမျာ အပေါ်ပိုင်းဗလာ ဖြစ်သွားရှာပီ။ မတ်တပ်ရပ်လျှက် မျက်လုံးလေး စုံမှိတ်လို့ အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်နေရှာတယ်။
နားရွက်ကလေးတွေက နီရဲနေတာ မျက်နာတစ်ခုလုံး ပန်းသွေးရောင်ထနေရှာတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျနော့် အိမ်နီးချင်း သူနာပြု ဆရာမလေး ဒေါ်ခင်ချိုမေ ခမျာ ယောကျာ်းဆိုလို့ ကျနော်နဲ့ပဲ ဆုံဖူးကြောင်း သိသာနေတယ်။ လိုးဖို. အကြောင်းဖန်လာတော့လည်း ကျနော်ဖြည့်စည်းပေးရမှာပေါ့။ သားဖွား ဆေးအကြောင်းတေ နားလည်နေတော့ သိပ်မချူပ် လိုက်ပါဘူး မွေးလူနာရှိတိုင်း နိုက်မွေး နေရတော့ သူအတွက် အတွေ့အကြုံတေက ရိုးနေပါပြီလေ ။ တစ်ချိူ့ဆေးကြောင်းတေတောင် ကျနော့် သူကပြန်သင်ပေးနေတာ ဗိုက်ကြီးမှာမပူရတော့ဘူးပေါ့။
ခါးမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် စည်းနှောင်ထားတဲ့ ထမီလေးကိုပါ ဆွဲချွတ်ချလိုက်တော့ အောက်ခံ မဝတ်ထားတဲ့ ဆရာမလေး တစ်ကိုယ်လုံးဝစ်လစ် စလစ်ဖြစ်သွားရှာပီ။ မျက်လွှာကလေးချလို့ တောင့်တောင့်လေးရပ်နေတဲ့ ဆရာမလေးကို မျက်စိထဲမြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါဗျာ။ အဆီပိုမရှိတဲ့ ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်ကလေး၊ ချက်နက်နက်ကလေး၊ ဝါဝင်းနေတဲ့ အသားရည်၊ သာမန်ထက်ထွားတဲ့ ချိုဗူးကြီးနှစ်လုံးက တင်းရင်း လုံးကျစ်လို့ တွဲမနေဘူး။ အောက်ဖက်ကို ကြည့်ပါဦး၊ အမွှေးနုနုလေးတွေဖုံးအုပ်ထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကလေး။ ဆင်စွယ်လို ချောမွှတ်နေတဲ့ လက်မောင်းအိုးကလေး ၂ခုကို ကိုင်လိုက်ရင်း သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို တစ်ပတ် လှည့်ပေးလိုက်တယ်။
ကျောပေးထားတဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားလေးကလည်း တပ်မက်စရာပါလေ။ ကျောပြင် ကော့တော့တော့လေးက အပြစ်အနာဆာ ကင်းပီးပြေဆင်းအလာ အောက်ရောက်တော့ ကော့တက်သွားတဲ့ အိုးဝိုင်းကားကားလေးက အောက်ကို ပြန်ကောက်ပီး ပေါင်တံ လှလှလေးမှာ အဆုံးသတ်လို့ပေါ့။ အပြစ်ဆိုစရာမရှိတဲ့ ကိုယ်လုံး အလှပိုင်ရှင်ကလေးကို ကြည့်ပီး ကျနော့်လိင်စိတ်တွေ အရမ်းဆူပွက်နေမိပီ။ နက်မှောင်သန်စွမ်းလွန်းတဲ့ ကျစ်ဆံမြီး တုတ်တုတ်ကြီးကလည်း တင်ပါး အကျော်နားအထိ တွဲလျောင်းကျနေတော့ ဒီကျစ်ဆံမြီးကြီးကို အားရပါးရ လက်နဲ့ဆွဲပီး လေးဖက်ထောက် လိုးလိုက်ချင်စိတ်က တားမရတော့ဘူး။ ဘာမှစကားမဆိုမိပဲ တုန်ရီနေတဲ့ ကျနော် ပုဆိုးနဲ့ အတွင်းခံကို မြန်မြန်ချွတ်ချလိုက်ပီး မာတင်းနေတဲ့ လိင်တံကြီးကို တင်ပါး၂ခုကြားထဲထောက်ထားရင်း ဂုတ်သားဝင်းဝင်းလေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ရွရွလေးနမ်း၊ လက်၂ဖက်ကလဲဂျိုင်း အောက်က လျှိုပီး နို့၂လုံးကို အုပ်ကိုင်လိုက်တော့– “အို! ” ဆိုတဲ့ ညည်းသံကလေးနဲ့ တင်ပါးလေးကို အရှေ့ဖက်ကော့ပစ်တယ်။
“ဟင်းးး ဖိုးသ..သက် ချို အရမ်းမောလိုက်တာကွယ်” “ချစ်တယ်.. ဆရာမလေးရာ..” ‘ပလွတ်.. ပြွတ်စ်..ပြွတ်စ်’ ကျောပေးထားတဲ့ချစ်သူ ဆရာမလေးကို နို့၂လုံးကို အုပ်ကိုင် ညှစ်ချေရင်း သနပ်ခါးရနံ့လေးတွေ မွှေးကြိုင်နေတဲ့ ပုခုံး၊ ဂုတ်ပိုး၊ ပါးပြင်၊ နားရွက်ဖျားကလေး အဲ့ဒီလိုနေရာအနံ့ လျှောက်နမ်းပေးနေမိတယ်။ အောက်က ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်လေးတွေ စိုစပြုနေတဲ့ ကျနော့်လိင်တံမာမာကြီးနဲ့လည်း သူ့တင်ပါး ပြောင်ချောချောအိအိလေးကို ဟိုထောက်ဒီထောက် လိုက်ထောက်ရင်း ညှောင့်ပေးနေမိတယ်။ နို့၂လုံးကို အုပ်ကိုင်ထားရင်းလည်း နို့သီးခေါင်း စူစူလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မ ကြားညှပ်ကိုင်ပီး လှိမ့်ပေးနေလိုက်မိတယ်။ “ချို … ချို ဒူးတွေတအားပျော့လာပီကွာ မတ်တပ်ဆက်မရပ်နိုင်တော့ဘူး.. အမေ့!” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ခွေကျချင်သလိုဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ်လုံး ပုံ့ပုံ့လေးကို ဖမ်းထိန်းထားရင်း ခြေလွှတ်လက်လွှတ် ယက်ကန်ကန်လေး ဖြစ်သွားအောင် ဆွဲပွေ့ချီလိုက်မိတယ်။ ခြေလှမ်းခပ်ကျဲကျဲလှမ်းလို့ ကုတင်ပေါ် အသာအယာချထားပေးလိုက်ပီး ပက်လက်လှန် ဒူးထောင်ပေါင်ကားဖြစ်အောင် အနေအထား ပြင်ထားပေးလိုက်တယ်။
ကနြောျအောကျကနေ ကုတငျပေါျလှမျးမတကျပဲ ကွမျးပွငျပေါျ ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျရငျး ပေါငျကားထားတဲ့ ဆရာမလေးကို ကုတငျစောငျးနားအထိ ဆှဲယူလိုကျတယျ။ ရငျဘတျကလေးက ဖားဖိုလို မွင့ျလိုကျနှိမ့ျလိုကျဖွဈပီး စိတျလှုပျရှားနတေဲ့ ဆရာမလေးက ခေါငျးထောငျကွည့ျလာတယျ။ ကနြောျက ဂရုမစိုကျသလိုလုပျရငျး ခေါငျးအုံးတဈလုံးကို ဆှဲယူပီး ဆရာမ တငျပါးတှအေောကျကို ထိုးထည့ျဖို့ကွိုးစားမိတယျ။ ရသှားပီ။ တငျပါးအောကျ ခေါငျးအုံးခံလိုကျတော့ ခပျမွင့ျမွင့ျလေးဖွဈလာတဲ့အပွငျ နီရဲနတေဲ့ အကှဲကွောငျးလေးက ပိုလို့တောငျ ပွဲအာအာလေး ဖွဈလာသလိုပဲ။ အဖုတျမှှေးလေးတှပေေါျမှာ အကှဲကွောငျးထဲက တောကျတောကျယိုကလြာတဲ့ အရညျလေးတှကေ သီးလို့တောငျနေ ပါပီကောလေ။ “ဆရာမလေး” “ရှငျ! (ခေါငျးကလေးထောငျထလာပီး ရီဝေေ၀ ရှကျဝဲဝဲလေးနဲ့ သူ့ပေါငျကွားထဲ မကြျနာအပျမလို လုပျနတေဲ့ ကနြော့ျကို ငေးကွည့ျနတေယျ) “ကနြော့ျကို အထငျသေးမှာလားဗြာ” “ဟေ့အေး .. သေးဘူး ပို… ပိုပီးတောငျ ခစြျမိလာတာ … ဘယျတော့မှ အထငျမသေးပါ.. အာ့ အာ့ ရှီးးးး” ခေါငျးနဲ့ မှှေ့ယာ ရိုကျခတျသံ ဘုတျကနဲ မွညျသှားတဲ့အထိ ဆရာမလေးနောကျပွနျ လှဲအိပျသှားရှာတယျ။
ပါးစပ်ကလည်း အကျယ်ကြီးပဲ အော်ညည်းလို့ပေါ့။ ဆရာမလေး ပြန်ဖြေတာမှ မဆုံးလိုက်ဘူး ဖောင်းကြွနေတဲ့ အရည်ရွှဲရွှဲ အဖုတ်ဖောင်းလေးကို ကျနော် ရှလွှတ်ကနဲကောက်လျှက်ပစ်လိုက်တာကိုးဗျ။ ချိုမြတဲ့ အဖုတ်ရည်အရသာနဲ့အတူ (နည်းနည်းတော့ ငံတယ်ဗျ) အနံ့ယဉ်ယဉ်လေးပါ ရှူမိတာမို့ လိင်စိတ်တောင် ပိုကြွလာသလိုပဲ။ အဖုတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်း လျှာကို တောင့်တောင့်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပီး အစုန်အဆန် ထိုးခွဲပေးနေမိတယ်။ နည်းနည်းလေး လျှာညောင်းသလိုဖြစ်လာရင် အစိအပေါ်ကို လျှာနဲ့ တရုတ်စာရေးသလို ပျော့ပျော့ကလေး စုတ်တံနဲ့ ခြစ်သလို ဘယ်ညာကစား။ ပင်ပန်းသလိုဖြစ်လာရင် အစိကို သကြားလုံးစုတ်သလို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်။ အပေါက်ဝကို နှုတ်ခမ်းနဲ့တေ့ထားပီး လျှာကို ဝင်နိုင်သလောက်သွင်းပီးမွှေ့ပေးနဲ့ ဆက်တိုက် တိုက်စစ်ဆင်ပေးလိုက်တာ ကျနော့်ဆံပင်တွေကို လက်၂ဖက်နဲ့ အတင်းဆွဲပီး တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် အကြောတွေဆွဲရင်း တစ်ချီပီးသွားရှာတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ကျနော်လည်း အသက်၀၀ ရှူနိုင်တော့လို့ ဆီးခုံလေးပေါ် မျက်နာအပ်ပီး ၂မိနစ်လောက် အသက်ပြင်းပြင်းရှူရင်း အမောဖြေနေမိတယ်။
အမောပြေသွားတာနဲ့ မတ်တပ်ချက်ချင်းရပ် နီရဲနေတဲ့ ကျနော့် ထိပ်ဖူးနဲ့ အရည်တွေ အိုင်ထွန်းနေတဲ့ အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးကို သေချာချိန်ပီး တေ့ထားလိုက်တယ်။ အလိုးခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် ဆရာမလေး မျက်လုံးမှိတ်ပီး မှိန်းနေရာက ဖျတ်ကနဲ မျက်လုံးပွင့်လာပီး ခေါင်းထောင်ထလာတယ်။ ချွေးစက်ကလေးတွေ စိုရွှဲနေတဲ့ ကြားက မျက်နာဖူးဖူးလေးက ဆံနွယ်ခွေခွေလေးတွေ ဝဲကျနေတာ ချစ်စရာလေးဗျာ။ အင်မတန်ကောင်း တဲ့ အဖုတ်အလျှက်ခံပီးတဲ့နောက် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ကာမ အရသာကို ခံစားရတော့မှာမို့ တက်ကြွလာတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေဆိုတာ သူ့အကြည့်က ဖော်ပြနေတယ်။
“အို!..” “အားးး ကောင်းလိုက်တာ.. စီးပိုင်နေတာပဲ ဆရာမရာ နာလားဟင်? “သာသာလေး ဖိနော် … မနာဘူး … နည်းနည်းတော့ ရင်ခေါင်းထဲမှာ တစ်ဆို့ဆို့ကြီး … ဒါပေမယ့် ချို ခံနိုင်ပါတယ် … အားးးး ရှိ.. ရှီးးး” ကျနော် တအားမလုပ်ပါဘူး .. ဖွဖွလေးပဲ ဆောင့်မယ်နော် ဆရာမ” လိင်တံက လည်းသံပိုက်လုံးတစ်ချောင်းလို မာကျောလွန်းနေတော့ နူးညံ့လွန်းတဲ့ အဖုတ်နံရံတွေကို ထိုးထိုးခွဲပီး ဝင်သွားသလို ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်းလဲ ထိပ်ဖူး ဒစ်နဲ့ ဆွဲချိတ်ထုတ်လိုက်သလို အဖုတ်တစ်ပြင်လုံး စူခုံးကြွပီး ပါပါလာတာဗျ။
ခုထိ တစ်ဝက်လောက်ရောက်အောင် မနည်းထိုးထည့်နေရသေးတယ်။ အတွင်းနားရောက်ဖို့ နည်းနည်းလိုနေသေးတယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နို့၂လုံးကို လှမ်းဆုပ်ပီး ဖြေးဖြေးချင်းပဲ ဆွဲလိုးနေလိုက်တာ စိတ်ထဲမှာ ဟာကနဲဖြစ်သွားလို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ လိင်တံက အဆုံးထိဝင်သွားပီ။ ခုဆို ဆီးခုံ၂ခုက ဂဟေ ဆက်မိနေပီလေ။ နောက်ထပ် ၁၀ချက်လောက် အစအဆုံး အသွင်းအထုတ်လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်အဆင်ချောသွားပီမို့ အားထည့်ပီး ခပ်ဆဆလေး ဆောင့်ပေးနေလိုက်တယ်။ “အင့် အင့် အင့် ဟူးးးး ကျွတ်ကျွတ်! ဖိုးသက်လေး .. “ချို” ပြန်.. ပြန်ဖြစ်လာပြန်ပီ.. မောလိုက်တာ… မရပ်နဲ့နော်.. ဆက်တိုက်လေးဆောင့်ပေး …
အားး ဘယ်လိုကြီးမှန်း မသိဘူးကွာ ..မရတော့ဘူး သိလား … အိုးးးးး” ဆရာမလေး ပီးပြန်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပီမို့ ဒီအချိန်မှာ အဖုတ်ကွဲအောင် ဆောင့်လည်း မနာတော့ဘူးလို့ မီးစိမ်းပြလာတာမှန်း ရိပ်မိပီး နို့ကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေကို ခါးကျင်ကျင်လေးဆီ ပြောင်းကိုင်ရင်း အသားကုန်ဆောင့်လိုးနေမိတယ်။ ကျနော့် လိင်တံကို အသားကုန် အဖုတ်ကြွက်သားတွေက ဆွဲညှစ်လိုက်တာ ခံလိုက်ရတော့ သူအရမ်းကောင်းပီး ကာမအရသာ ရသွားပီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်မရပ်သေးပဲ တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ ဆောင့်လိုးနေတုံးပဲ။ “ဆရာမ.. ဆရာမ ကျနော်လည်း မရတော့ဘူးဗျာ ထွက်တော့မယ် … ဟားးးး” ” “ချို” သေတော့မယ်ကွာာာာ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်း မသိဘူးးးး နောက်တခါ မောလာပြန်ပီ… မရတော့ပြန်ဘူး… မရတော့ဘူး မရပ်နဲ့နော်…. မရပ်ပေးနဲ့ အားးးးးးး” “ဖတ်.. ဖတ်… ဖြောင်း..ဖြောင်းးး … အီးးး” ပုံမှန်အားဖြင့် ကာမပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ မလွယ်တဲ့ မိန်းမတွေထဲမပါတဲ့ ကျနော့်ဆရာမလေးဟာ ပီးသွားတာကို ဆက်တိုက် ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုက်တိုင်း ဆက်တိုက် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထပ်ထပ်ပီးတတ်မှန်း
ကျနော်ရိပ်မိပီး မီးပွင့်မတတ်ဆောင့်လိုးရင်း ကျနော့်လိင်တံကို အဖုတ်က တဇိဇိနဲ့ ဆွဲအညှစ်မှာ ဘယ်လိုမှ မထိန်းထားနိုင်တော့ပဲ အပြင်းထန်ဆုံး ဆောင့်လိုးရင်း သုတ်ရည်ပူနွေးနွေးတွေကို ပန်းထည့်ပစ်လိုက်မိပီ။ အင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဆာလောင်နေသမျှ အားရပါးရ ပီးလိုက်ရလို့လားမသိဘူး သုတ်ရည်ပန်း အထုတ်မှာ ကျနော့်နားထဲက လေတွေက တရှူး၂နဲ့ ထွက်သွားသလိုပဲ။ နားထဲမှာ တဝီဝီတောင် မြည်လာတယ်။ နောက်ဆုံး လက်ကျန်သုတ်ရည် တစ်စက်နှစ်စက်လောက်ကို ညှစ်ထုတ်ရင်း အဖုတ်နဲ့ လိင်တံတပ်ထားလျှက်နဲ့ ဆရာမလေး ကိုယ်ပေါ်ကို ကျနော်မှောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ ပြီးပါပြီ….။
အပ္ခ်ဳပ္စက္ခုံကို ကြယ္ပီး ထိုင္ေနတဲ့ ကိုယ္လုံး အိေထြးေထြးေလးကို အတင္းဆြဲထုတ္ပီး ထူမလိုက္တယ္။ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုပဲ ဘေလာက္အင္းက်ီ ႏွိပ္စိေလးေတြကို တေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ျမည္ေအာင္ ဆြဲဖြင့္လိုက္တယ္။ ရင္ဘတ္တစ္ခုလုံး ဟင္းလင္းပြင့္ ထြက္သြားတာနဲ႔ အနက္ေရာင္ဘရာစီယာေလး မႏိုင္ဝန္ထမ္းထားရတဲ့ ဝါဝင္းစိုေျပတဲ့ ႏို႔ႀကီး၂မႊာက ဝင္းကနဲ ေပၚလာတယ္။ အခ်ိန္မဆြဲေတာ့ပဲ ဘေလာက္လက္ျပတ္ကေလးကို ခြၽတ္ခ်ရင္း ဘရာ ခ်ိတ္ကေလးေတြကိုပါ သူမဂ်ိဳင္းေအာက္ကေန လက္လွ်ိဳပီး ျဖဳတ္ပစ္လိုက္မိတယ္။ ခုဆိုရင္ က်ေနာ့္ဆရာမေလးခမ်ာ အေပၚပိုင္းဗလာ ျဖစ္သြားရွာပီ။ မတ္တပ္ရပ္လွ်က္ မ်က္လုံးေလး စုံမွိတ္လို႔ အသက္ရႉသံျပင္းျပင္းနဲ႔ တစ္ကိုယ္လုံး တဆတ္ဆတ္တုန္ေနရွာတယ္။
နား႐ြက္ကေလးေတြက နီရဲေနတာ မ်က္နာတစ္ခုလုံး ပန္းေသြးေရာင္ထေနရွာတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ့္ အိမ္နီးခ်င္း သူနာျပဳ ဆရာမေလး ေဒၚခင္ခ်ိဳေမ ခမ်ာ ေယာက်ာ္းဆိုလို႔ က်ေနာ္နဲ႔ပဲ ဆုံဖူးေၾကာင္း သိသာေနတယ္။ လိုးဖို. အေၾကာင္းဖန္လာေတာ့လည္း က်ေနာ္ျဖည့္စည္းေပးရမွာေပါ့။ သားဖြား ေဆးအေၾကာင္းေတ နားလည္ေနေတာ့ သိပ္မခ်ဴပ္ လိုက္ပါဘူး ေမြးလူနာရွိတိုင္း ႏိုက္ေမြး ေနရေတာ့ သူအတြက္ အေတြ႕အႀကဳံေတက ႐ိုးေနပါၿပီေလ ။ တစ္ခ်ိဴ႕ေဆးေၾကာင္းေတေတာင္ က်ေနာ့္ သူကျပန္သင္ေပးေနတာ ဗိုက္ႀကီးမွာမပူရေတာ့ဘူးေပါ့။
ခါးမွာ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ စည္းေႏွာင္ထားတဲ့ ထမီေလးကိုပါ ဆြဲခြၽတ္ခ်လိုက္ေတာ့ ေအာက္ခံ မဝတ္ထားတဲ့ ဆရာမေလး တစ္ကိုယ္လုံးဝစ္လစ္ စလစ္ျဖစ္သြားရွာပီ။ မ်က္လႊာကေလးခ်လို႔ ေတာင့္ေတာင့္ေလးရပ္ေနတဲ့ ဆရာမေလးကို မ်က္စိထဲျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ၾကစမ္းပါဗ်ာ။ အဆီပိုမရွိတဲ့ ဗိုက္သားရွပ္ရွပ္ကေလး၊ ခ်က္နက္နက္ကေလး၊ ဝါဝင္းေနတဲ့ အသားရည္၊ သာမန္ထက္ထြားတဲ့ ခ်ိဳဗူးႀကီးႏွစ္လုံးက တင္းရင္း လုံးက်စ္လို႔ တြဲမေနဘူး။ ေအာက္ဖက္ကို ၾကည့္ပါဦး၊ အေမႊးႏုႏုေလးေတြဖုံးအုပ္ထားတဲ့ ေစာက္ဖုတ္ေဖာင္းေဖာင္းကေလး။ ဆင္စြယ္လို ေခ်ာမႊတ္ေနတဲ့ လက္ေမာင္းအိုးကေလး ၂ခုကို ကိုင္လိုက္ရင္း သူ႔ကိုယ္လုံးေလးကို တစ္ပတ္ လွည့္ေပးလိုက္တယ္။
ေက်ာေပးထားတဲ့ ကိုယ္ေနဟန္ထားေလးကလည္း တပ္မက္စရာပါေလ။ ေက်ာျပင္ ေကာ့ေတာ့ေတာ့ေလးက အျပစ္အနာဆာ ကင္းပီးေျပဆင္းအလာ ေအာက္ေရာက္ေတာ့ ေကာ့တက္သြားတဲ့ အိုးဝိုင္းကားကားေလးက ေအာက္ကို ျပန္ေကာက္ပီး ေပါင္တံ လွလွေလးမွာ အဆုံးသတ္လို႔ေပါ့။ အျပစ္ဆိုစရာမရွိတဲ့ ကိုယ္လုံး အလွပိုင္ရွင္ကေလးကို ၾကည့္ပီး က်ေနာ့္လိင္စိတ္ေတြ အရမ္းဆူပြက္ေနမိပီ။ နက္ေမွာင္သန္စြမ္းလြန္းတဲ့ က်စ္ဆံၿမီး တုတ္တုတ္ႀကီးကလည္း တင္ပါး အေက်ာ္နားအထိ တြဲေလ်ာင္းက်ေနေတာ့ ဒီက်စ္ဆံၿမီးႀကီးကို အားရပါးရ လက္နဲ႔ဆြဲပီး ေလးဖက္ေထာက္ လိုးလိုက္ခ်င္စိတ္က တားမရေတာ့ဘူး။ ဘာမွစကားမဆိုမိပဲ တုန္ရီေနတဲ့ က်ေနာ္ ပုဆိုးနဲ႔ အတြင္းခံကို ျမန္ျမန္ခြၽတ္ခ်လိုက္ပီး မာတင္းေနတဲ့ လိင္တံႀကီးကို တင္ပါး၂ခုၾကားထဲေထာက္ထားရင္း ဂုတ္သားဝင္းဝင္းေလးကို ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ႐ြ႐ြေလးနမ္း၊ လက္၂ဖက္ကလဲဂ်ိဳင္း ေအာက္က လွ်ိဳပီး ႏို႔၂လုံးကို အုပ္ကိုင္လိုက္ေတာ့– “အို! ” ဆိုတဲ့ ညည္းသံကေလးနဲ႔ တင္ပါးေလးကို အေရွ႕ဖက္ေကာ့ပစ္တယ္။
“ဟင္းးး ဖိုးသ..သက္ ခ်ိဳ အရမ္းေမာလိုက္တာကြယ္” “ခ်စ္တယ္.. ဆရာမေလးရာ..” ‘ပလြတ္.. ႁပြတ္စ္..ႁပြတ္စ္’ ေက်ာေပးထားတဲ့ခ်စ္သူ ဆရာမေလးကို ႏို႔၂လုံးကို အုပ္ကိုင္ ညႇစ္ေခ်ရင္း သနပ္ခါးရနံ႔ေလးေတြ ေမႊးႀကိဳင္ေနတဲ့ ပုခုံး၊ ဂုတ္ပိုး၊ ပါးျပင္၊ နား႐ြက္ဖ်ားကေလး အဲ့ဒီလိုေနရာအနံ႔ ေလွ်ာက္နမ္းေပးေနမိတယ္။ ေအာက္က ေရွ႕ေျပးအရည္ၾကည္ေလးေတြ စိုစျပဳေနတဲ့ က်ေနာ့္လိင္တံမာမာႀကီးနဲ႔လည္း သူ႔တင္ပါး ေျပာင္ေခ်ာေခ်ာအိအိေလးကို ဟိုေထာက္ဒီေထာက္ လိုက္ေထာက္ရင္း ေညႇာင့္ေပးေနမိတယ္။ ႏို႔၂လုံးကို အုပ္ကိုင္ထားရင္းလည္း ႏို႔သီးေခါင္း စူစူေလးေတြကို လက္ညႇိဳးလက္မ ၾကားညႇပ္ကိုင္ပီး လွိမ့္ေပးေနလိုက္မိတယ္။ “ခ်ိဳ … ခ်ိဳ ဒူးေတြတအားေပ်ာ့လာပီကြာ မတ္တပ္ဆက္မရပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး.. အေမ့!” ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ေခြက်ခ်င္သလိုျဖစ္လာတဲ့ ကိုယ္လုံး ပုံ႔ပုံ႔ေလးကို ဖမ္းထိန္းထားရင္း ေျခလႊတ္လက္လႊတ္ ယက္ကန္ကန္ေလး ျဖစ္သြားေအာင္ ဆြဲေပြ႕ခ်ီလိုက္မိတယ္။ ေျခလွမ္းခပ္က်ဲက်ဲလွမ္းလို႔ ကုတင္ေပၚ အသာအယာခ်ထားေပးလိုက္ပီး ပက္လက္လွန္ ဒူးေထာင္ေပါင္ကားျဖစ္ေအာင္ အေနအထား ျပင္ထားေပးလိုက္တယ္။
ကေျႏာ်ေအာက်ကေန ကုတင်ေပါ်လွမ်းမတက်ပဲ ကြမ်းပြင်ေပါ် ဒူးေထာက်ထိုင်ခႀလိဳက်ရင်း ေပါင်ကားထားတဲ့ ဆရာမေလးကို ကုတင်ေစာင်းနားအထိ ဆွဲယူလိုက်တယ်။ ရင်ဘတ်ကေလးက ဖားဖိုလို မြင့်လိုက်ႏွိမ့်လိုက်ဖြဈပီး စိတ်လႈပ်ရွားနေတဲ့ ဆရာမေလးက ေခါင်းေထာင်ကြည့်လာတယ်။ ကေျႏာ်က ဂ႐ုမစိုက်သလိုလုပ်ရင်း ေခါင်းအုံးတဈလုံးကို ဆွဲယူပီး ဆရာမ တင်ပါးတွေအောက်ကို ထိုးထည့်ဖို႔ကြိဳးစားမိတယ်။ ရသွားပီ။ တင်ပါးေအာက် ေခါင်းအုံးခံလိုက်ေတာ့ ခပ်မြင့်မြင့်ေလးဖြဈလာတဲ့အပြင် နီရဲနေတဲ့ အကွဲေကြာင်းေလးက ပိုလို႔ေတာင် ပြဲအာအာေလး ဖြဈလာသလိုပဲ။ အဖုတ်ေမွွးေလးတွေပေါ်မွာ အကွဲေကြာင်းထဲက ေတာက်ေတာက်ယိုကၾလာတဲ့ အရည်ေလးတွေက သီးလို႔ေတာင်ေန ပါပီေကာေလ။ “ဆရာမေလး” “ရွင်! (ေခါင်းကေလးေထာင်ထလာပီး ရီေဝေ၀ ရွက်ဝဲဝဲေလးနဲ႔ သူ႔ေပါင်ကြားထဲ မၾက်နာအပ်မလို လုပ်နေတဲ့ ကေျႏာ့်ကို ေငးကြည့်နေတယ်) “ကေျႏာ့်ကို အထင်ေသးမွာလားျဗာ” “ေဟ့ေအး .. ေသးဘူး ပို… ပိုပီးေတာင် ချစ်မိလာတာ … ဘယ်ေတာ့မွ အထင်မေသးပါ.. အာ့ အာ့ ရွီးးးး” ေခါင်းနဲ႔ ေမွွ႔ယာ ႐ိုက်ခတ်သံ ဘုတ်ကနဲ မြည်သွားတဲ့အထိ ဆရာမေလးေနာက်ပြန် လွဲအိပ်သွားရွာတယ်။
ပါးစပ္ကလည္း အက်ယ္ႀကီးပဲ ေအာ္ညည္းလို႔ေပါ့။ ဆရာမေလး ျပန္ေျဖတာမွ မဆုံးလိုက္ဘူး ေဖာင္းႂကြေနတဲ့ အရည္႐ႊဲ႐ႊဲ အဖုတ္ေဖာင္းေလးကို က်ေနာ္ ရွလႊတ္ကနဲေကာက္လွ်က္ပစ္လိုက္တာကိုးဗ်။ ခ်ိဳျမတဲ့ အဖုတ္ရည္အရသာနဲ႔အတူ (နည္းနည္းေတာ့ ငံတယ္ဗ်) အနံ႔ယဥ္ယဥ္ေလးပါ ရႉမိတာမို႔ လိင္စိတ္ေတာင္ ပိုႂကြလာသလိုပဲ။ အဖုတ္အကြဲေၾကာင္းအတိုင္း လွ်ာကို ေတာင့္ေတာင့္ကေလးျဖစ္ေအာင္လုပ္ပီး အစုန္အဆန္ ထိုးခြဲေပးေနမိတယ္။ နည္းနည္းေလး လွ်ာေညာင္းသလိုျဖစ္လာရင္ အစိအေပၚကို လွ်ာနဲ႔ တ႐ုတ္စာေရးသလို ေပ်ာ့ေပ်ာ့ကေလး စုတ္တံနဲ႔ ျခစ္သလို ဘယ္ညာကစား။ ပင္ပန္းသလိုျဖစ္လာရင္ အစိကို သၾကားလုံးစုတ္သလို တႁပြတ္ႁပြတ္စုပ္။ အေပါက္ဝကို ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ေတ့ထားပီး လွ်ာကို ဝင္ႏိုင္သေလာက္သြင္းပီးေမႊ႕ေပးနဲ႔ ဆက္တိုက္ တိုက္စစ္ဆင္ေပးလိုက္တာ က်ေနာ့္ဆံပင္ေတြကို လက္၂ဖက္နဲ႔ အတင္းဆြဲပီး တစ္ကိုယ္လုံး တဆတ္ဆတ္ အေၾကာေတြဆြဲရင္း တစ္ခ်ီပီးသြားရွာတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ က်ေနာ္လည္း အသက္၀၀ ရႉႏိုင္ေတာ့လို႔ ဆီးခုံေလးေပၚ မ်က္နာအပ္ပီး ၂မိနစ္ေလာက္ အသက္ျပင္းျပင္းရႉရင္း အေမာေျဖေနမိတယ္။
အေမာေျပသြားတာနဲ႔ မတ္တပ္ခ်က္ခ်င္းရပ္ နီရဲေနတဲ့ က်ေနာ့္ ထိပ္ဖူးနဲ႔ အရည္ေတြ အိုင္ထြန္းေနတဲ့ အဖုတ္ ေဖာင္းေဖာင္းေလးကို ေသခ်ာခ်ိန္ပီး ေတ့ထားလိုက္တယ္။ အလိုးခံရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသိေၾကာင့္ ဆရာမေလး မ်က္လုံးမွိတ္ပီး မွိန္းေနရာက ဖ်တ္ကနဲ မ်က္လုံးပြင့္လာပီး ေခါင္းေထာင္ထလာတယ္။ ေခြၽးစက္ကေလးေတြ စို႐ႊဲေနတဲ့ ၾကားက မ်က္နာဖူးဖူးေလးက ဆံႏြယ္ေခြေခြေလးေတြ ဝဲက်ေနတာ ခ်စ္စရာေလးဗ်ာ။ အင္မတန္ေကာင္း တဲ့ အဖုတ္အလွ်က္ခံပီးတဲ့ေနာက္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ကာမ အရသာကို ခံစားရေတာ့မွာမို႔ တက္ႂကြလာတဲ့ မ်က္လုံးေလးေတြဆိုတာ သူ႔အၾကည့္က ေဖာ္ျပေနတယ္။
“အို!..” “အားးး ေကာင္းလိုက္တာ.. စီးပိုင္ေနတာပဲ ဆရာမရာ နာလားဟင္? “သာသာေလး ဖိေနာ္ … မနာဘူး … နည္းနည္းေတာ့ ရင္ေခါင္းထဲမွာ တစ္ဆို႔ဆို႔ႀကီး … ဒါေပမယ့္ ခ်ိဳ ခံႏိုင္ပါတယ္ … အားးးး ရွိ.. ရွီးးး” က်ေနာ္ တအားမလုပ္ပါဘူး .. ဖြဖြေလးပဲ ေဆာင့္မယ္ေနာ္ ဆရာမ” လိင္တံက လည္းသံပိုက္လုံးတစ္ေခ်ာင္းလို မာေက်ာလြန္းေနေတာ့ ႏူးညံ့လြန္းတဲ့ အဖုတ္နံရံေတြကို ထိုးထိုးခြဲပီး ဝင္သြားသလို ဆြဲထုတ္လိုက္တိုင္းလဲ ထိပ္ဖူး ဒစ္နဲ႔ ဆြဲခ်ိတ္ထုတ္လိုက္သလို အဖုတ္တစ္ျပင္လုံး စူခုံးႂကြပီး ပါပါလာတာဗ်။
ခုထိ တစ္ဝက္ေလာက္ေရာက္ေအာင္ မနည္းထိုးထည့္ေနရေသးတယ္။ အတြင္းနားေရာက္ဖို႔ နည္းနည္းလိုေနေသးတယ္။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ႏို႔၂လုံးကို လွမ္းဆုပ္ပီး ေျဖးေျဖးခ်င္းပဲ ဆြဲလိုးေနလိုက္တာ စိတ္ထဲမွာ ဟာကနဲျဖစ္သြားလို႔ ငုံ႔ၾကည့္လိုက္ေတာ့ လိင္တံက အဆုံးထိဝင္သြားပီ။ ခုဆို ဆီးခုံ၂ခုက ဂေဟ ဆက္မိေနပီေလ။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ခ်က္ေလာက္ အစအဆုံး အသြင္းအထုတ္လုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္အဆင္ေခ်ာသြားပီမို႔ အားထည့္ပီး ခပ္ဆဆေလး ေဆာင့္ေပးေနလိုက္တယ္။ “အင့္ အင့္ အင့္ ဟူးးးး ကြၽတ္ကြၽတ္! ဖိုးသက္ေလး .. “ခ်ိဳ” ျပန္.. ျပန္ျဖစ္လာျပန္ပီ.. ေမာလိုက္တာ… မရပ္နဲ႔ေနာ္.. ဆက္တိုက္ေလးေဆာင့္ေပး …
အားး ဘယ္လိုႀကီးမွန္း မသိဘူးကြာ ..မရေတာ့ဘူး သိလား … အိုးးးးး” ဆရာမေလး ပီးျပန္ေတာ့မယ္ဆိုတာ သိလိုက္ပီမို႔ ဒီအခ်ိန္မွာ အဖုတ္ကြဲေအာင္ ေဆာင့္လည္း မနာေတာ့ဘူးလို႔ မီးစိမ္းျပလာတာမွန္း ရိပ္မိပီး ႏို႔ကိုင္ထားတဲ့ လက္ေတြကို ခါးက်င္က်င္ေလးဆီ ေျပာင္းကိုင္ရင္း အသားကုန္ေဆာင့္လိုးေနမိတယ္။ က်ေနာ့္ လိင္တံကို အသားကုန္ အဖုတ္ႂကြက္သားေတြက ဆြဲညႇစ္လိုက္တာ ခံလိုက္ရေတာ့ သူအရမ္းေကာင္းပီး ကာမအရသာ ရသြားပီဆိုတာ သိလိုက္ရတယ္။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္မရပ္ေသးပဲ တေျဖာင္းေျဖာင္းနဲ႔ ေဆာင့္လိုးေနတုံးပဲ။ “ဆရာမ.. ဆရာမ က်ေနာ္လည္း မရေတာ့ဘူးဗ်ာ ထြက္ေတာ့မယ္ … ဟားးးး” ” “ခ်ိဳ” ေသေတာ့မယ္ကြာာာာ ဘာေတြျဖစ္ေနမွန္း မသိဘူးးးး ေနာက္တခါ ေမာလာျပန္ပီ… မရေတာ့ျပန္ဘူး… မရေတာ့ဘူး မရပ္နဲ႔ေနာ္…. မရပ္ေပးနဲ႔ အားးးးးးး” “ဖတ္.. ဖတ္… ေျဖာင္း..ေျဖာင္းးး … အီးးး” ပုံမွန္အားျဖင့္ ကာမပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ မလြယ္တဲ့ မိန္းမေတြထဲမပါတဲ့ က်ေနာ့္ဆရာမေလးဟာ ပီးသြားတာကို ဆက္တိုက္ ၾကမ္းၾကမ္းေဆာင့္လိုက္တိုင္း ဆက္တိုက္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ထပ္ထပ္ပီးတတ္မွန္း
က်ေနာ္ရိပ္မိပီး မီးပြင့္မတတ္ေဆာင့္လိုးရင္း က်ေနာ့္လိင္တံကို အဖုတ္က တဇိဇိနဲ႔ ဆြဲအညႇစ္မွာ ဘယ္လိုမွ မထိန္းထားႏိုင္ေတာ့ပဲ အျပင္းထန္ဆုံး ေဆာင့္လိုးရင္း သုတ္ရည္ပူေႏြးေႏြးေတြကို ပန္းထည့္ပစ္လိုက္မိပီ။ အင္မတန္ျပင္းထန္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ဆာေလာင္ေနသမွ် အားရပါးရ ပီးလိုက္ရလို႔လားမသိဘူး သုတ္ရည္ပန္း အထုတ္မွာ က်ေနာ့္နားထဲက ေလေတြက တရႉး၂နဲ႔ ထြက္သြားသလိုပဲ။ နားထဲမွာ တဝီဝီေတာင္ ျမည္လာတယ္။ ေနာက္ဆုံး လက္က်န္သုတ္ရည္ တစ္စက္ႏွစ္စက္ေလာက္ကို ညႇစ္ထုတ္ရင္း အဖုတ္နဲ႔ လိင္တံတပ္ထားလွ်က္နဲ႔ ဆရာမေလး ကိုယ္ေပၚကို က်ေနာ္ေမွာက္က်သြားခဲ့တယ္။ ၿပီးပါၿပီ….။
Categorized as အင်းဆက် Tagged ကျနော့ဆရာမလေး
အကောင်းဆုံးဘဲ မမရီ 😋